बाइबलका कथाहरू: यहोशू नाइके बन्छ - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
मोशा इस्राएलीहरूसित कनान देश जान चाहन्छ। त्यसैले यहोवालाई बिन्ती गर्दै ऊ यसो भन्छ: ‘हे यहोवा, बिन्ती छ, मलाई यर्दन नदी पारिको असल देशमा जान दिनुहोस्।’ तर यहोवा यो जवाफ दिनुहुन्छ: ‘बस, भयो! अब यस विषयमा मसँग अरू कुरा नगर्!’ यहोवाले किन त्यसो भन्नुभयो, तिमीलाई थाह छ?
मोशाले पहरामा हिर्काउँदा यहोवाको मान नगरेको हुनाले। मोशा र हारूनले त्यतिबेला पहराबाट पानी निकाल्ने यहोवा हुनुहुन्छ भनेर इस्राएलीहरूलाई भनेनन्। त्यसैकारण, यहोवाले ती दुवैलाई कनान देश जान दिनुभएन।
हारून मरेको केही महिनापछि यहोवाले मोशालाई यसो भन्नुहुन्छ: ‘यहोशूलाई लगेर प्रधान पूजाहारी एलाजार र इस्राएलीहरूको सामुन्ने उभ्याउनू। र त्यहाँ सबैको सामुन्ने यहोशू नै अबदेखि नयाँ नाइके हुनेछ भनेर सबैलाई भन्नू।’ चित्रमा हेर त, यहोवाले भन्नुभएझैं मोशाले गरिरहेको छ।
त्यसपछि यहोवाले यहोशूलाई यो कुरा भन्नुहुन्छ: ‘बलियो र सहासी हुनू, नडराउनू। मैले प्रतिज्ञा गरेको कनान देशमा तैंले इस्राएलीहरूलाई लैजानेछस् र म तँसित हुनेछु।’
केही समयपछि यहोवाले मोशालाई मोआब देशको नबो डाँडा चढ्न अह्राउनुहुन्छ। डाँडामाथिबाट मोशाले यर्दन नदी पारि कनानको सुन्दर देश देख्छ। यहोवाले मोशालाई यसो भन्नुहुन्छ: ‘मैले अब्राहाम, इसहाक र याकूबका छोराछोरीलाई दिने प्रतिज्ञा गरेको देश यही हो। मैले तँलाई तेरै आँखाले हेर्न दिएँ तर तँ त्यहाँ जान पाउनेछैनस्।’
नबो डाँडामै मोशाको मृत्यु हुन्छ। मृत्यु हुँदा मोशा १२० वर्षको थियो। तर त्यतिखेरसम्म पनि ऊ बलियो थियो र उसको आँखा कमजोर भएको थिएन। मोशा मरेपछि इस्राएलीहरू धेरै दुःख मानेर रुन थाल्छन्। तर अब यहोशू आफ्नो नयाँ नाइके भएकोले उनीहरू खुसी छन्।
गन्ती २७:१२-२३; व्यवस्था ३:२३-२९; ३१:१-८, १४-२३; ३२:४५-५२; ३४:१-१२.
मोशासित उभिने अरू दुई जना मान्छे को हो, चित्र हेरेर बताऊ।
यहोवाले यहोशूलाई के भन्नुहुन्छ?
मोशा किन नबो डाँडा चढ्छ? यहोवाले मोशालाई के भन्नुहुन्छ?
मोशाको मृत्यु हुँदा उसको उमेर कति थियो?
इस्राएलीहरू किन दुःखी हुन्छन्? तैपनि उनीहरूसित खुसी हुनुपर्ने के कारण छ?
गन्ती २७:१२-२३ पढ्नुहोस्।
यहोशूले यहोवाबाट कस्तो गम्भीर जिम्मेवारी पायो? आज पनि यहोवा आफ्ना जनहरूको ख्याल गर्नुहुन्छ भनेर हामी कसरी थाह पाउँछौं? (गन्ती २७:१५-१९; प्रेरि. २०:२८; हिब्रू १३:७)
व्यवस्था ३:२३-२९ पढ्नुहोस्।
यहोवाले मोशा र हारूनलाई प्रतिज्ञा गरिएको मुलुकमा जाने अनुमति किन दिनु भएन र यसबाट हामी के पाठ सिक्छौं? (व्यव. ३:२५-२७; गन्ती २०:१२, १३)
व्यवस्था ३१:१-८, १४-२३ पढ्नुहोस्।
यहोवाले दिनुभएको अनुशासनलाई मोशाले विनम्रतासाथ स्वीकारे भनेर तिनले बिदा हुने बेला इस्राएलीहरूलाई भनेका शब्दहरूबाट कसरी थाह पाउन सक्छौं? (व्यव. ३१:६-८, २३)
व्यवस्था ३२:४५-५२ पढ्नुहोस्।
परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा कस्तो असर पार्नुपर्छ? (व्यव. ३२:४७; लेवी १८:५; हिब्रू ४:१२)
व्यवस्था ३४:१-१२ पढ्नुहोस्।
मोशाले यहोवालाई प्रत्यक्ष नदेखे तापनि व्यवस्था ३४:१० ले यहोवासित उसको सम्बन्ध कस्तो थियो भनेर बताउँछ? (प्रस्थ. ३३:११, २०; गन्ती १२:८)